Food Machinery, Silicon Ibronzi, Parts Ukugcwala - Gongji
steel Martensitic stainless
Nokumelana ukumelana steel stainless
Ubushushu ukumelana steel stainless
Austempered duetile yentsimbi (adi)
Carbon & welding, noshowo steel
Yenza ingxubevange steel
Pressure ebizwa steel
Siphose ingxubevange copper
Siphose aluminium ingxubevange
Sheet metal okuyingxenye
Sheet sokunyathela yingxenye
Cofa apha ukuze
inkqubo yemveliso steel stainless ukubonisa imveliso
Cofa umfanekiso ngezantsi ukujonga inkqubo yemveliso
Thina resources reserve mveliso omkhulu umtyhido kunye kwanokwenza kunye noxwebhu metal okuyingxenye. Ezi mpahla zonke kuhlaziywa kwaye zivavanywe nathi yaye ukuhlangabezana ukuvelisa imveliso kumazwe angaphandle.
Siyiqhelile kakuhle kunye nemigangatho zobugcisa kunye nomgangatho ezifana ASTM, Din, EN, BS, NF, JIS, AS njalo njalo.
Thina technical & umgangatho iqela leengcali kakhulu ekubunjweni kunye kwanokwenza kunye noxwebhu metal okuyingxenye.
Ukuba ufuna imveliso ngokwemigaqo castings, sifuna iphepha metal okuyingxenye njl Nceda uqhagamshelane nam. inkampani yethu iya ngokunyanisekileyo lisebenzisane, inkonzo egqibeleleyo, iimveliso ezigqwesileyo, ixabiso elifanelekileyo, ixesha unikezelo olukhawulezayo okuyingenelo kuwe.
Idilesi: High-zobugcisa Zone, Xinxiang City, Henan kwiPhondo, China